24 vashanyi vemuno vakaurayiwa mutsaona yemumugwagwa weTunisia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » 24 vashanyi vemuno vakaurayiwa mutsaona yemumugwagwa weTunisia
Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Tunisia Kupwanya Nhau • Akasiyana Nhau
Vanhu makumi maviri nevana vaurawa mutsaona yemumugwagwa weTunisia. Tiye Ministry of Internal Affairs yeTunisia yakashuma kuti vanhu makumi maviri nevaviri vakaurayiwa, makumi maviri nevaviri vakakuvara mutsaona nebhazi revashanyi. According kune agency, bhazi rakaumburuka ndokudhonzera mugoronga.
Paive nevanhu makumi mana nevana mairi, vazhinji vacho vaive vana vechikoro uye vadzidzi vaifamba parwendo kunze kweguta. Bhazi raifamba richibva kuguta guru reTunisia, raive reimwe yemasangano akazvimirira ekufamba.
Kunyangwe kufukidzwa kune dzimwe nhepfenyuro dzenhau, zvinoita sekunge vashanyi vekunze vaive pakati pevakabatwa
Bhazi rakanga rakananga kuguta reAyn Darahim, chiitiko ichi chakaitika kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwenyika. Sekureva kwenhau dzeTunisia, Mutungamiri Kais Saied akashanyira nzvimbo yenjodzi iyi.
Paramende yeTunisia yakapa chirevo ichikumbira maMinister eInternational Affairs uye Hutano kuti vaongorore basa rekununura uye vape rubatsiro rwezvinhu uye zvepfungwa kumhuri dzevakawirwa nenjodzi iyi. Bazi rezvehutano, zvakare, rakazivisa chirongwa chenyika chekupa ropa kune avo vakaurayiwa.